Iindaba-Ngo-Okthobha u-15,2019, iWandeKai yathatha inxaxheba kwi-126th Canton Fair.
Ngo-Okthobha u-15,2019, uWandeKai uthathe inxaxheba kwi-126th Canton Fair.
Ixesha: 15th ukuya kwi-19 Okt, 2019
IZiko loRhwebo lwaNgaphandle lase China liziko likarhulumente ngokuthe ngqo phantsi koMphathiswa Wezorhwebo. Okoko i-China Import and Export Fair (ekwabizwa ngokuba yi-Canton Fair) yasekwa ngo-1957, inoxanduva lokulungiselela i-Canton Fair. Ngexesha le-non-Canton Fair, umgcini kunye nokusingathwa kwemiboniso eyahlukeneyo, imiboniso kunye neentetho, ezinje nge China (Guangzhou) Expo Ifenitshala yase China, China (Guangzhou) Exhibition yezeMoto yamanye amazwe, iMalaysia China yokuThengisa nokuThumela iiMpahla ngaphandle kweNtetho kunye neNtetho zotyalo mali, njl. IZiko loRhwebo likwangumnini kwaye lisebenza kweyona mboniso inkulu yanamhlanje eAsia nakwindawo ephambili kwihlabathi, iholo lezeMiboniso laseCanton Fair elikwiPazhou Island, kwiSithili saseHaizhu, eGuangzhou. Ngaphezulu kweminyaka engama-50 yamava ekucwangciseni imiboniso, impumelelo ebalaseleyo kunye neenkonzo zobungcali, iZiko loRhwebo lwaNgaphandle lase China likwisikhundla esibalulekileyo kwimveliso yase China.
I-Canton Fair ngumnyhadala wokurhweba wamazwe aphesheya onembali ende, esona sikali sikhulu, owona mboniso upheleleyo, uninzi lwabazimasi, ukuhanjiswa ngokubanzi kwelizwe lomthombo wabathengi kunye nengeniso enkulu yeshishini e-China.
Liqonga elibalaseleyo lamashishini amaTshayina ukuphonononga imakethi yamanye amazwe kunye nesiseko esingumzekelo sokuphumeza izicwangciso zase China zokukhula korhwebo lwangaphandle. ICanton Fair isebenza njengeqonga lokuqala neliphambili lokukhuthaza urhwebo lwangaphandle lwase China, kunye nebarometer yecandelo lezorhwebo lwangaphandle. Yifestile, umxholo kunye nophawu lokuvulwa kwe China.
Iimveliso zahlulwe zangamacandelo amathathu: iivelufa zobhedu, izixhobo zobhedu, Iimveliso zeHVAC. Ukuma kwemveliso kuluhlu oluphezulu, ibakala, kugxininisa iingenelo zokusingqongileyo, yayiyiNtla Melika, iYurophu kunye nezinye iimarike eziphuhlisiweyo zabathengi, ngakumbi eMntla Melika, kwikota yokuNikezela ngeValve yokuNikezela;IiValve zoNikezelo eziNinzi; F1960 & F1807 iintsika neZilinganisi; Ibhrasi yebhola yevalve ithandwa.